Intengiso | Ulwazi oluluncedo lomntu wonke.
Amagama e-brand aphezulu: ukulinganiswa. Iimpawu ezidumile kunye nelogos zabo
Namhlanje, amagama aziwayo asemlonyeni womntu wonke. Siyaqhela kubo kwaye ungacingi ngento yokuba umntu wakhe waqulunqa la magama, ukuba abasemva kwabo ...
URonald McDonald -umascot kaMcDonald
Ngubani uRonald McDonald? Lo ngumhlekisi oyimascot yenkampani kaMcDonald eyaziwayo kwihlabathi. Ngokophando olwenziwe ngo-2001 ngababhali bencwadi ethi "Fast Food Nation", uRonald McDonald (jonga ifoto engezantsi) kakhulu ...
Izibonelelo zentengiso kwi-Intanethi ngaphezulu kwezinye iintlobo zentengiso
ezaposwa ngomhla 15.09.2019 23.11.2019
Yonke imihla abantu bachitha iiyure ezininzi kwi-Intanethi ukusombulula iingxaki zabo zomsebenzi kunye nobomi. Abaphulaphuli bahlala bekhula, zombini ngokobungakanani kunye nomgangatho: ulutsha, ulutsha, abantu abaqolileyo abanemivuzo ephezulu ...
MALUNGA: Yintoni le nqaku kwaye yintoni imbali yendalo yayo?
Uhlala ufuna ukuphuma kwisihlwele. Kungakhathaliseki ukuba lixesha lonyaka kunye nemozulu ngaphandle kwefestile, kukho umnqweno wokujonga isitayela. Kwangelo xesha, ndifuna iimpahla kunye nezincedisi hayi kuphela ...
Ngubani umyili wemizobo?
Uyilo yenye yezona mveliso zithandwayo kwilizwe lethu. Ngubani ozibiza ngokuba ungumyili: ukusuka kubaphuhlisi bewebhusayithi abanzulu ukuya kwiinkosi eziqhelekileyo zokuzicoca. Nangona kunjalo, eyona ...
Umgangatho ophezulu wokuprinta
ezaposwa ngomhla 27.08.2019
Ukuvela kobuchwephesha obutsha bokushicilela kuphucula umgangatho weeprinta kwaye kwandisa ububanzi besicelo sabo. Phakathi kwazo ukushicilelwa kwe-sublimation kubonakala, eyona nto ibalulekileyo kukusebenzisa umfanekiso kwimveliso evela ...
Umncedisi we-PR weSAMP: ngokukhawuleza nangokufanelekileyo
ezaposwa ngomhla 19.08.2019
Zonke ii-admins ze-novice kungekudala okanye kamva ziqala ukuba nomdla kulo mbuzo: "Uyikhuthaza njani iseva ye-GTA: SAMP?" PR yeserver ye-SAMP inokwahlulwa phantsi kweendidi ezimbini. Eyokuqala, yeyona ilula, ...
Indlela yokwenza ipowusta e-Photoshop kwaye wenze ngokwakho
ezaposwa ngomhla 13.06.2019
Uyenza njani ipowusta kwi-Photoshop okanye uyenza ngokwakho? Yeyiphi indlela ofanele uyisebenzise? Siza kuqwalasela zombini iinketho ngokweenkcukacha, kwaye emva koko wonke umntu unokukhetha efanelekileyo kuye. Uyenza njani ipowusta kwiFotohop rhoqo ...
Yintoni eyenza impumelelo yeeflaya? Ubungakanani be-Flyer, ukuyila, ukulandelela
Namhlanje kunzima ukuhamba ezitalatweni kwaye uphephe isithembiso sokuthatha iphetshana lolwazi kunye nawe ezandleni zomntu omi kufutshane nomasipala ombaxa. Kwaba yinto eqhelekileyo - ukubuyela ekhaya, umzekelo, nge ...
Imbali ye logo. ILogo "BMW", "Skoda", "Audi", "iToyota", "Adidas": yintoni imbali yokudala
Kuya kufuneka uvume ukuba kwihlabathi leemveliso zimbalwa kakhulu iilogo ezaziwa ngumntu wonke, ziyaqonda ngenxa yentengiso emibalabala kumabonwakude okanye kwiipowusta ezimibalabala ezixhonywe ezitratweni zedolophu. Iqale njani imbali ye "logo" ...
I-CPM-yintoni leyo? Isetyenziswa njani i-CPM kwintengiso?
Xa uququzelela umboniso okanye umkhankaso wentengiso kwimeko yenethiwekhi, nawuphi na umthengisi ubala uqikelelo lwabiwo mali. Kubalulekile kumthengi wephulo lokwazisa ukuba abone ukuba ihanjiswa njani imali yokuphunyezwa kwayo, nokuba ichithwe ngokwenjongo yabo ...
Indlela yokudala imizekelo emihle yeepapasho zentengiso. Imigaqo kunye neengcebiso
Iflaya yenye yeendlela ezingabizi kwaye zisebenza kakuhle kakhulu zokukhuthaza imveliso okanye inkonzo. Yenza intengiso kunye nemisebenzi yolwazi kumthengi. Kwaye ukuba kukho isidingo sonyuselo ...
Umzila osebenzayo we-DIY: umqondiso wokwenza
Ukuba ujonga ngokusondeleyo, zininzi iintengiso ezahlukileyo ezimibalabala ezijikelezayo. Ifakwe kwizakhiwo, kwiibhodi zezaziso, kwiifestile zeeofisi nakwikofu, kwaye ezinye ziyibeka ngqo kwiifestile zeemoto. Konke kuxhomekeke ...
ILogo: iindidi zelogos. I logos ye Nkampani. ILogo creation
Umsebenzi wayo nayiphi na inkampani uqala ngokudalwa kwesazisi esidibeneyo, izinto eziphambili ezibandakanya ukwenziwa kwelogo. Ngulo mqondiso obonisa ukuba yeyiphi imveliso okanye inkonzo kwishishini elithile, ibonisa umxholo wayo kunye ...
Ziziphi iintlobo zeentengiso
Ukuphucula ishishini lakho ngempumelelo, nokuba lolorhwebo, iinkonzo ezahlukeneyo okanye enye into, kufuneka kuqala ulikhuthaze, ulenze ukuba laziwe. Kwaye intengiso idlala indima enkulu kulo mbandela. Yayinguye ...
Isibhengezo sohlobo lwesibhengezo
Intengiso iyeyona nto ibalulekileyo kubomi bemihla ngemihla kwezi ntsuku. Uhamba nathi kuyo yonke indawo: xa usiya emsebenzini, xa uhambahamba esixekweni, ngezothutho, kumabonakude. Enye yeentlobo zentengiso, ...
Isiqalo "sokunyusa" ngoku simiselwe ngokuqinileyo kubomi bemihla ngemihla bomntu wanamhlanje. Kuwo onke amacala sihlala siva "inyathelo lokunyusa", "iimpahla zonyusa", "indawo yokunyusa", "izikhumbuzo", "iividiyo zonyuselo", "iikhowudi zokunyusa" - olu luhlu luyaqhubeka ...
Usonge - yintoni na? Olunye ulwazi
Umxholo othi "ukusonga" uvela kulwimi lwaseJamani, igama elithi "fold" kutoliko lithetha "groove", "groove". Umxholo uthathe ingcambu kulwimi lwethu ngaphandle kotshintsho. Ukusonga kusetyenziswa ukwenziwa kopapasho lwephepha, umzekelo, iincwadana, ...
Imibuzo ye-53 kwiziko ledatha eliveliswe kwimizuzwana ye-0,796.